नेताहरुको झोला बोक्न छोडेर आफनो क्षमता अनुसारको कामतर्फ अग्रसर हुन आग्रह ! – ebaglung.com
नेताहरुको झोला बोक्न छोडेर आफनो क्षमता अनुसारको कामतर्फ अग्रसर हुन आग्रह !
२०७५ मंसिर २३, आईतवार ०६:५२	Top News, थप समाचार
गुमानसिँह भण्डारी, गल्कोट २०७५ मसिर २३ । नेपाल बिद्यार्थी संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष डिल्लिराम सुवेदीले युवाहरु नेताहरुको झोला बोकेर हिड्न छोडेर आफनो क्षमता अनुसारको कामतर्फ अग्रसर हुन आग्रह गरेका छन् ।
उपाध्यक्ष सुवेदीले स्वतन्त्र बिद्यार्थी युनियन गल्कोट बहुमुखी क्यापसले गल्कोटमा आयोजना गरेको शैक्षिक, खेलकुद तथा सास्कृतिक कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । प्रत्येक ब्यक्तिसँग बिभिन्न किसिमका क्षमता हुन्छ भन्दै क्षमताका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
दिनप्रतिदिन युवाहरु बिदेशीने क्रम तिब्र भएको भन्दै सुवेदीले उनिहरुलाई देशमै रोक्नका लागी यहाँ भएका युवाहरुले केहि गरेर देखाउनुपर्ने बताए । नेपाल बिद्यार्थी संघले आफुले राखेका योजनालाई पुरा गर्दै जाने बताउदै अहिलेको सरकार गफमा भुलेको आरोप लगाए । सुवेदीले अहिलेको सरकारले जनतामा बिभिन्न किसिमका भ्रम छरेको बताउदै यसले दिर्घकालीन समस्या निम्त्याउने बताए । उनले गल्कोटमा आयोजना गरिएको यस्ता खाले कार्यक्रमले बिद्यार्थीलाई आफनो क्षमता मापन गर्ने र अगाडि बढ्न प्रेरणा मिल्ने समेत बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल बिद्यार्थी संघका केन्द्रिय सह महामन्त्री हरिहर शर्मा, नेविसंघ जिल्ला अध्यक्ष खडक थापा, गलकोट बहुमुखी क्यापसका क्यापस ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मुकुण्दसिह भण्डारी, स्वतन्त्र बिद्यार्थी युनियन धौलागीरी बहुमुखी क्यापसका सभापति मनिष थापा, महिला जागरण केन्द्र हटियाका अध्यक्ष मञ्जु शर्मा चालिसे लगायतले शुभकामना मन्तब्य व्यक्त गरेका थिए ।
खुल्ला बिद्यालय स्तरिय भलिबल प्रतियोगितामा १५ समुहको सहभागी रहेकोमा स्पाइरल ग्यालेक्सी एकेडेमी पोखरा प्रथम आयोजक समुह ए व्दितिय भएका छन । त्यस्तै साबिक वडा स्तरिय फुटबल प्रतियोगितामा आयोजक समुह वि प्रथम र आयोजक समुह ए व्दितिय भएका छन् ।
सो अवसरमा खुल्ला बिद्यालय स्तरिय सामुहिक नृत्य प्रतियोगिता, एकल नृत्य प्रतियोगिता, शैक्षिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम र बिद्यालय स्तरिय बतृत्वकला प्रतियोगिता समेत सम्पन्न भएका छन ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी र बिशिष्ट अतिथीलाई मायाको चिनो प्रदान गरिएको थियो । सो अवसरमा कलाकार तथा मोडल निशा श्रीसको सास्कृतिक प्रस्तुति रहेको थियो । कार्यक्रम स्वतन्त्र बिद्यार्थी युनियन गलकोट बहुमुखि क्यापसका सभापति गुमानसिह भण्डारीको अध्यक्षता र बिद्यार्थी धुर्व सुवेदीको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
बागलुङ उद्योग बाणिज्य संघको मतगणना जारी, यस्तो छ, पछिल्लो परिणाम !
अपडेट : बाउबासंघको खुल्ला सदस्य पदमा कस्को कति मत ?